Osimiri Melbourne kacha mma | Akụkọ Njem
Osimiri Melbourne kacha mma
Maria José Roldan | | Australia, Osimiri
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịga Melbourne maka ezumike, ikekwe ị ga-achọ ileta ihe niile ị nwere ike ime n’isi obodo a nke steeti Victoria nke Australia. N’afọ 2011, ahọpụtara ya ka obodo kacha mma n’ụwa ibi, ihe doro anya na-eme ka ọtụtụ ndị mmadụ chọọ ịga ma mara obodo a.
Ọ dị n'ụsọ oké osimiri nke Port Phillip Bay. Na mgbakwunye, ọ nwere ụlọ ọrụ Victorian na nke oge a nke na-enye ndị njem nleta ya ụfọdụ n'ime osimiri kachasị mma n'Australia. Mgbe ahụ Achọrọ m ịgwa gị banyere ụfọdụ n'ime osimiri kachasị mma na Melbourne Ya mere ọ bụrụ na ị gaa nnukwu obodo Australia a na-achọ osimiri dị egwu, ị nwere ezigbo ndepụta ịhọrọ ma nwee ọ .ụ.
1 Osimiri St. Kilda
2 Rightsọ osimiri Brighton
3 Osimiri Mordialloc
4 Osimiri Williamstown
5 Osimiri Sorrento
6 Osimiri Elwood
7 Osimiri Altona
8 Osimiri ndị ọzọ ị kwesịrị ịma
Osimiri St. Kilda
Otu n'ime osimiri a kacha mara amara bụ St. Kilda Beach, ọ bụ ezigbo osimiri maka igwu mmiri yana maka egwuregwu mmiri ọ bụla n'ihi oke mmiri ya. Site na okwute o nwere nnukwu mkpagharị nke nwere ájá mara mma, ịnwere ike ịnụ ụtọ echiche dị egwu nke obodo ahụ.
Rightsọ osimiri Brighton
Ọ bụrụ n’ịsọ osimiri a, ịnwere ike iburu ụgbọ ga-ebuga gị Williamstown ma ọ bụ Southbank. Nnukwu nhọrọ ọzọ bụ Brighton Beach, otu n'ime ọmarịcha osimiri dị na Melbourne. O nwere ụlọ ịsa ahụ dị n'ụsọ osimiri n'ụsọ osimiri, ọ bụ ebe dị mma maka ndị na-egwu mmiri, ndị na-asa ahụ na ndị na-egwu mmiri. Mgbe ifufe fe, e nwere ụfọdụ mara ezigbo mma mmiri na ebili mmiri ezigbo maka surfers, ọ bụ ezie na ọ bụkwa ebe dị mma ma ọ bụrụ na ị na-amasị ịkụ azụ.
Na mgbakwunye, osimiri dị mkpirikpi site na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ, ụlọ ahịa na ụlọ ahịa, na-eme ka Brighton Beach bụrụ otu n'ime ewu ewu.
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ osimiri nwere ihe karịrị nanị ájá na mmiri, mgbe ahụ ị ga-achọ Mordialloc. Mordi bụ mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ na ebe ị ga-agarịrị maka amara ya. O nwere ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, ebe a na-egwu ahịhịa, ebe a na-egwu nri, ụzọ igwe kwụ otu ebe ... yana oghere ịchọrọ ịga leta.. Ọ bụ osimiri a ma ama, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ izere ìgwè mmadụ, ọ ga-akacha mma izere ịgagharị na ngwụsị izu.
Osimiri a mara ndị obodo dị ka 'Willy Beach', ọ pere mpe mana ọ nwere ọtụtụ mma, na mgbakwunye, ọ dị nso na obodo ahụ. Ọ bụ ama na-ewu ewu maka ndị na-egwu mmiri, ndị na-agba mmiri, na ndị ọkwọ ụgbọ mmiri, mana ọ bụ echiche dị egwu na-adọta ndị mmadụ na Williamstown akụkọ ihe mere eme. Ọ bụrụ n ’ị ga - achọpụta ihe ịtụnanya ya, ị ga - ama ihe m na - ekwu.
Naanị njem ije nkeji ise site n'ọdụ ụgbọ oloko ị ga-ahụ echiche doro anya na nke a na-egbochi nke ọhụụ nke obodo ahụ - mara mma n'ehihie na ọhụụ n'abalị. Ka a sịkwa ihe mere na Aha ya bụ Williamstown bụrụ ebe kachasị mma maka Afọ Ọhụrụ, ebe otutu mmadu na-agbakota ime oku oku nke onye obula nwere obi uto.
Osimiri Sorrento bụ oke osimiri. Nso mmiri Port Phillip Bay n'ihi na ọ nwere ha n'otu akụkụ yana Bass Strait na nke ọzọ, ọ bụ ebe zuru oke iji nwee ọwụwa anyanwụ. Ọ bara uru ịme njem iji nwee ọmarịcha aja na mmiri ya.
20 nkeji oge si Melbourne obodo center, Elwood Osimiri bụ isi ihe na-adọrọ mmasị maka ezinụlọ dum. Na mgbakwunye na osimiri ọ nwekwara ọtụtụ akụrụngwa ịnụ ụtọ ụbọchị ahụ dị ka anụ eji ahịhịa, ebe nkiri na ebe egwuregwu na ahịhịa. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, ọ nwere ebe nwere nchekwa iji nwee ike igwu mmiri nwayọ, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwaga ọzọ, gaa njem na ịgba ịnyịnya ígwè n'ụsọ osimiri.
Melbourne's Altona bụ ebe dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ umengwụ n’ụsọ osimiri. Ogologo oge gara aga, mmiri Altona bụ ndị a ma ama maka ọnụ ọgụgụ algae dị ịtụnanya ọ nwere. Taa, site na nhicha kwa ụbọchị nke ndị ọkachamara nke ebe ahụ rụrụ, mmiri nke Altona Ha dị ọcha karịa mgbe ọ bụla ma ọ bụ ebe dị egwu igwu mmiri.
Onwere akụkụ osimiri ebe etinyere kitesurfing. Dịka a sị na ezughi, ọ nwekwara ọtụtụ ụlọ nri, ebe a na-ere ahịa na ebe ndị ọzọ eji atụrụ ndụ.
Osimiri ndị ọzọ ị kwesịrị ịma
Na mgbakwunye n'ụsọ mmiri niile m gwara gị banyere ya - na ị nwere ike deeworị nke ọma iji mara ndị masịrị gị nke ukwuu-, enwerekwa ndị ọzọ ga-amasị gị ma na ọ bụrụ na i nwekwuo oge , I nwere ike iche echiche banyere ịmara. Fọdụ bụ (na ihe niile dị mma iji nwee obi ụtọ na ezinụlọ):
Okporo ụzọ Kerfort
Carrum-ọnụ nke Osimiri Patterson-
Dị ka ị hụworo, ọ bụghị osimiri ole na ole dị gburugburu Melbourne. Ọ bụrụ n’atụmatụ ị ga-aga Melbourne ị ga - achọpụta na n’obodo Ọstrelia a ị nwere ike ịchọta ụsọ mmiri maka ihe masịrị gị niile, ịnụ ụtọ ịsa ahụ, ịme mmiri, soro ezinụlọ gị nọrịa otu ụbọchị, ịnwe anụ achicha, ịnụ ụtọ nri ehihie ma ọ bụ nanị, na-eje ije ma na-enwe odida obodo.
Toga n'ụsọ osimiri bụ nnukwu echiche iji gbanahụ ọgba aghara nke obodo, ebe Melbourne bụ obodo nke abụọ ndị mmadụ kacha biri na Australia, yabụ ị ga-ahụ etu ndụ nrụgide nwere ike isi nọrọ n'okporo ámá ya. Maka ndị bi na ya, ụsọ osimiri dị ka valvụ mgbapụ dị mma iji nwee obi ụtọ na ndụ na mpụga obodo, ichefu ọrụ ụlọ kwa ụbọchị na ịnụ ụtọ ịdị ịtụnanya, ịdị ukwuu na ịdị oke ọnụ nke oke osimiri na-enyefe anyị yana etu ọ dị anyị.
Yabụ ọ bụrụ na ị nwere ohere ịga njem n'ụsọ osimiri Australia a, egbula oge ị were map, hụ ebe ị ga-anọ ma chọta osimiri nke kachasị amasị gị iji nọrọ ụbọchị ma nwee ọ enjoyụ. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmalite njem, chọọ njem ọha na eze ma ọ bụ gbazite ụgbọ ala ka ị were obere ụzọ wee mara oke osimiri nwere ike ị ga-enwe n’oge ị nọ na nleta gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Osimiri » Osimiri Melbourne kacha mma
Ihunanya ebe ị gara na Italy
Njem ịga Okinawa, ebe okpomọkụ Japan